'Fanambarana' Becka Paulson 'nataon'i Stephen King Nankany amin'ny CW
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly 'Fanambarana' Becka Paulson 'nataon'i Stephen King Nankany amin'ny CW
by Waylon Jordan Jolay 21, 2020
by Waylon Jordan Jolay 21, 2020 975 hevitra
Ny CW dia naka zon'ny adaptation Stephen King's tantara fohy “Fanambarana 'Becka Paulson” ambanin'ny lohateny miasa fanambarana araka ny Deadline.
Rehefa avy nitifitra ny tenany tamin'ny basy fantsika tsy nahy izy, Pollyanna-ish Becca Paulson dia notendren'i Jesosy mihoatra ny azy ho "voafidiny" amin'ny fampijanonana ny apokalipsy. Mba hanavotana an'izao tontolo izao, i Becca dia tsy maintsy manaporofo fa azo vidiana ity planintsika farany mihemotra eto an-tany ity - manomboka amin'ny tanindrazany afovoany andrefana.
Maisie Culver (Last Man Miantona) dia kasaina hanoratra ny andiany mifototra amin'ny tantaran'i King, ary i Katie Lovejoy dia mpanatanteraka mpanatanteraka.
Navoaka tamin'ny famoahana iray ny tantara Vato mikodiadia tamin'ny taona 1984 ary nanjary loharanom-pahalalana ho an'ny fizarana tamin'ny taona 1990 an'ny Ny fetra ivelany (sary etsy ambony). Ity fizarana ity dia kintana Catherine O'Hara (Schitt's Creek), John Diehl (Stargate), ary Steven Weber (The mamirapiratra mini-series). Weber koa dia nitarika ny fizarana.
Na dia mbola tsy tafiditra ao anatin'ny iray amin'ireo fanangonana an'i King aza izy io dia namboarina ho zana-tany kely ao amin'ny tantarany Ireo Tommyknockers.
Mahaliana ny mahita ny fomba nitantanan'i Culver nanitatra ny tantara fohy ho andian-dahatsoratra iray, na dia tsy isalasalana aza fa betsaka ny zavatra azo atao ao anatin'io famaritana io.
iHorror dia hitazona anao hatrany fanambarana satria misy tsipiriany misimisy kokoa.